होइन, Greta छैन एटिक्राईष्ट छ
म जहाँ लेखक 16 वर्षीया पर्यावरण कार्यकता Greta Thunberg ए
म आज पहिले कसैले पुनरुद्धार आन्दोलन संग जलवायु आन्दोलन तुलना दिन पढ्ने अखबार मा। तर पुनरुद्धार आन्दोलनहरु आशा, तपाईं जलवायु आन्दोलन मा प्राप्त नगर्ने प्राप्त।
म जहाँ लेखक 16 वर्षीया पर्यावरण कार्यकता Greta Thunberg एटिक्राईष्ट छ कि छैन भनेर आश्चर्य एक पाठक इमेल मलाई पठाइएको थियो गरिएको छ। त्यस प्रश्नको म तुरुन्तै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ:
"होइन, Greta Thunberg छैन एटिक्राईष्ट छ।"
Greta एक महिला छ। बाइबलले अनुमान तुरुन्तै पतन त एटिक्राईष्ट, एक मानिस छ भनेर भन्छन्। यो बाइबल अनुरूप छैन।
2 thes 2:3। कुनै एक तपाईं कुनै पनि तरिकामा धोका गरौं। त्यो दिन को लागि नहीं, फोहोर पहिले नै बनाएको छ गरिएको, जबसम्म र पापको मानिस, perdition हुनेछ छोरा [अर्थात् एक मानिस], प्रकट गरिएको छ।
एक आलोचना गर्नु हुँदैन
को पाठ्यक्रम म कुनै पाठक इमेल प्रकाशित। mejlets सामग्री गैर-धर्मशास्त्रीय छ बाहेक, म पनि lynched थियो। र अन्तिम कुरा अनौठो छ। स्पष्ट यो छ Greta Thunberg आलोचना छैन।
म जो उनको मूर्ख कुराहरू भन्नुभयो एक फुटबल कोच अब प्राप्त पढ्न निकाल । निश्चित, यो अनुचित भाषा थियो, तर तपाईं म के मतलब बुझ्छु। पहिले, म अमेरिकी टेलिभिजन देखि एक क्लिप देखेको छु, म जहाँ यो तुरुन्तै शब्दहरू अर्को मानिस द्वारा बन्द भनिएको थियो जो 16 वर्षीया केटी आलोचना यो थियो विश्वास:
"तपाईं एक बच्चा कसरी आलोचना हिम्मत, तपाईं हुर्किसकेका मानिस हो?!"
त्यो मात्र एक बच्चा छ, तर त्यो पनि म पहिले पढ्न जो तीन निदान, छ विकिपीडिया ", गम्भीर निराशा र बेकार को अनुभवी भावना", तर अब यो सिर्फ त्यो एक थियो भनेर भन्छन् र उनको 2018 निर्णय "क्रममा बरु निराशा फिर्ता झर्ने को, कदम जानुहोस्। "
तपाईं आलोचना यदि Greta एक बिरामी बच्चा आलोचना आरोप गर्न सकिन्छ। यसरी यो Greta Thunberg वरिपरि आन्दोलन विरुद्ध आलोचना सबै प्रकारका रोकिएको छ।
को पाठ्यक्रम यो गरेको छ जो त्यो त राम्रो थाह छ कि छैन त्यो हो, तर यो bokomliggande सेना र आर्थिक गतिविधिलाई छ।
र अमूल्य मानव - - येशू ख्रीष्ट आवश्यकता म आलोचना छैन Greta, त्यो एक बच्चा छ। के म अन्तरनिहित चासो र सेना द्वारा नराम्ररी प्रभावित। म Greta Thunberg देखे पहिलो पटक, म तुरुन्तै दुखी थियो।
त्यसपछि Greta त ठूलो बन्न गर्दैन र अझै म त प्रतिक्रिया। यो सबै मिडिया पछि छन् र उनको सम्म मेल खाने अनौठो छ। र कारण लागि प्रत्येक त्यहाँ amiss कुरा हो भनेर बुझ्न पर्छ।
मा Greta छ जो पनि मेरो 13 वर्षको छोरी, इन्स्टाग्राम , लाग्यो उनको संयुक्त राष्ट्र वाणी नक्कली थियो , र त्यो म केहि भन्न समय थियो पहिले मलाई एकदम spontaneously मलाई भन्नुभयो।
तिनीहरूले किनभने तपाईं सिर्फ एक बिरामी बच्चा आलोचना गर्न सक्दैन उनको बाहिर पठाएको छ त्यसैले Greta Thunberg पछि ती स्मार्ट थियो!
र त्यो प्राप्त गर्न सबै माथि थियो नोबेल शान्ति पुरस्कार गर्नुपर्छ, सबै भन्दा यसलाई नक्कली हो भनेर बुझ्न। पहिले उपाध्यक्ष र जलवायु कार्यकता अल गोर, उहाँले बनाइएको वृत्तचित्र लागि पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। म आफ्नो फिल्म मा भविष्यवाणी हो कि पढेको झूट र साँचो आउन ।
यो जस्तै परिस्थितिमा तपाईं मात्र ग्रह सुरक्षित गर्न जो दस वर्ष छ भन्छन्। एउटै Greta र उनको पूर्व अन्य बच्चाहरु नै कुरा गरेका छन् भन्छन्। र यसको बारेमा लागि थियो 30 वर्ष पहिले - 20 !
पृथ्वी अन्तर्गत छैन जानेछ
छैन 20 वा 30 वर्ष - धरती दस वर्ष छैन जानेछ। ताकि यस्ता सन्देशहरू आउँछ डुम को सबै अगमवक्ताहरू bogus छन्। पहिलो, येशूले आउन फिर्ता गर्नुपर्छ र उहाँले यस पृथ्वीमा यरूशलेम फर्केर!
माटो मुनि भएको छ भने, त्यसपछि येशूले फर्कन कुनै भूमि। तसर्थ, हामी प्रलय भविष्यवाणीहरू यस प्रकारको गलत हो भनेर बुझ्न।
तर येशूले एक हजार वर्ष आफ्नो फिर्ती पछि लागि पृथ्वीमा शासन गरेपछि, त्यसपछि यो एक नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी हुनेछ! तर त्यहाँ कुनै विनाश हुनेछ - यो एक rebirth हुनेछ।
कसैले पनि Greta Thunberg गर्न चर्च पत्रिका लेखिएको छ एक छ अगमवक्ता । होइन, त्यो एक अगमवक्ता छैन। त्यो अझै पनि अगमवक्ता हुन भने - त्यसपछि उहाँले गलत छ। आशा को एक अगमवक्ता अगमवाणी येशू ख्रीष्ट आशा र मुक्तिको बिना छन् Greta dost रूपमा यस्तो सन्देश र छैन।
बाइबल यसो भन्छ:
हितोपदेश 23:18: पक्कै पनि तपाईं भविष्यको रूपमा, र आफ्नो आशा अभाव लागि हुने छैन।
यर्मिया 29: 1: म तपाईं को लागि छ को योजना थाहा छ, तपाईं भविष्य र आशा दिन, प्रभु, शान्ति को विचार र दुष्ट को छैन भन्छन्।
हितोपदेश 24:14: त्यसैले आफ्नो प्राण लागि ज्ञान र बुद्धि छ। तपाईंले तिनीहरूलाई फेला पार्न भने, तपाईं एक भविष्य छ, र अभाव लागि आफ्नो आशा छैन।
यर्मिया 31: 1: तपाईंको भविष्यको लागि आशा छ, प्रभु भन्छन्। आफ्नो छोराछोरीले देश फर्कन पर्छ।
म आज पहिले कसैले संग जलवायु आन्दोलन तुलना दिन पढ्ने अखबार मा पुनरुद्धार आन्दोलन । तर मसीही पुनरुद्धार आन्दोलनहरु मा आशा, तपाईं जलवायु आन्दोलन मा प्राप्त नगर्ने प्राप्त गर्न केन्द्रमा येशूले छ।
तर जलवायु आन्दोलन एक धर्म भएको छ। "म हकदार YouTube मा एक भिडियो फेला | नयाँ जलवायु धर्म ग्रीन जागृति "। लार्स बर्न Swebb टेलिभिजन कल लागि पनि Greta Thunberg गरेको जलवायु गति प्रलय पंथ । गुटबन्दी, हामी मान्छे बाँधिएका छन् भनेर थाह र downtrodden, तर येशू ख्रीष्टमा, मान्छे स्वतन्त्र छन्।
हामी यो लेखको शुरुवात फर्केर जान भने, स्पष्ट छैन Greta Thunberg एटिक्राईष्ट छ। त्यहाँ धेरै इमेल मुद्रक पढेर। थर 666 छ र रंग इस्लामी हरियो जस्तै छ कि माथि Greta रूपमा इमेल उहाँले यस्तो लिफ्टहरु।
तर पर्यावरण आन्दोलन अर्कोतर्फ एटिक्राईष्ट को सुरूवात भाग हुन सक्छ। त्यहाँ आउँदै एटिक्राईष्ट सिंहासनमा छ सक्छ कि वैश्विक पर्यावरण आन्दोलन पछि बलियो शक्ति हुन्। एयर आन्दोलन सम्पूर्ण निर्दोष छैन। यो सबै मा, मान्छे दुरुपयोग हुन सक्छ र cynical खेलमा pawns हुन।
आदेश अर्थ को विकृति
म पनि एक फरक अर्थ शब्द कसरी दिन बारेमा उल्लेख थियो। कहिलेकाहीं म Greta "शिक्षा हड्ताल" त्यहाँ स्कूल हडताल को एउटा प्रश्न छ जब कि पढ्नुहोस्। लागि कसरी त्यो स्कूल अर्को देशमा, जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका रूपमा प्रहार सक्छ?
वा यो "हड्ताल" वा "जलवायु हड्ताल" कल। यसलाई केही हड्तालको एउटा प्रश्न छैन, तर प्रदर्शन र प्रचार। तपाईं यसलाई के को लागि कुराहरू कल गर्नुपर्छ। तर यसरी तिनीहरूले एक निश्चित दिशा मा उनलाई प्रभावित गर्न मानिसहरूको मन मा विचार र अवधारणाहरु छर्न।
Greta Thunberg सोध्न र कुनै आशा भएका अन्य सबै मानिसहरूलाई लागि प्रार्थना। तिनीहरूले उहाँलाई स्वीकार र सुरक्षित हुन त तिनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमाको सन्देश सुन्न भनेर प्रभुको प्रचारकहरू र अन्य सेवकहरूको तिनीहरूलाई पठाउने प्रार्थना!
मत्ती 9:38 । आफ्नो फसल मा कामदारहरूको बाहिर पठाउन प्रभु त्यसैले प्रार्थना गर्नुहोस्।
म पनि एक मसीही प्रतिनिधि, म यो एक पूजाहारी थिए विश्वास छ कि कतै पढ्न, आज हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा जलवायु वा वातावरण हो भन्नुभयो। होइन, यसलाई मुख्य मुद्दा छैन। मुख्य मुद्दा मानिसहरूले येशूलाई स्वीकार गर्न र सुरक्षित हुन आवश्यक छ।
Vecka 25, fredag 25 juni 2021 kl. 02:14